Iikhosi ze-11 zeDiploma ezingabizi kakhulu eCanada zaBafundi beZizwe ngeZizwe ngo-2022
Ukuba unqwenela ukufunda eCanada kwaye awunakho ukuyifumana, kuya kufuneka ujonge kuluhlu lwezifundo zexabiso eliphantsi eCanada zabafundi bamanye amazwe abaxoxwe kule post yebhlog. Unokufumana into ebamba umdla wakho kwaye iinkcukacha zinikezelwe ngendlela yokubhalisela isifundo ngasinye sediploma ukukunceda ukuba uqalise.
Idiploma sisatifikethi esinikezelwa liziko lemfundo, ngokwesiqhelo liziko loqeqesho kunye noqeqesho, iikholeji zoluntu, kunye nezinye iikholeji neeyunivesithi, ukubonisa ukuba umntu ugqibe ikhosi yokufunda. New York has some great vocational schools you can enroll in.
Iyaqhubeka ukubonisa ukuba unolwazi olunobuchule kwisifundo esithile. Ungongeza idiploma yakho kwi-CV yakho ngamathuba engqesho kubasebenzi kwaye ubonakalise inqanaba lesakhono sakho kubaxhasi abanokubakho kunye nabaqeshi. Ngokwesiqhelo, kuthatha i-12 ukuya kwi-18 iinyanga zokufunda ngokusisigxina ukugqiba kunye nokufumana idiploma.
Amaziko emfundo oqeqesho kunye noqeqesho, kwaye mhlawumbi iikholeji neeyunivesithi, mhlawumbi zibonelela ngeenkqubo zediploma kwizifundo ezinomdla kuwe kwingingqi yakho. Iyawucela ke umbuzo "Kutheni usiya kwidiploma nje eCanada?"
Ngokuqinisekileyo kuya kubakho izizathu ezizezakho eziza kuza nale mpendulo, ezinye izizathu zisenokuba zezi:
ICanada yenye yezona ndawo zintathu ziphezulu zemfundo emhlabeni ke amaziko akhe emfundo abambe udumo lwehlabathi kunye needigri kunye neediploma abazibonelelayo.
Amaziko aseCanada abonelela ngemfundo ekumgangatho wehlabathi kwiindawo ezininzi zokufunda, kubandakanya nezifundo zediploma, esinye sezizathu sokuba amaziko abekwe kwindawo ephezulu emhlabeni.
Ukufumana isidanga, idiploma, okanye isatifikethi salo naluphi na uhlobo nakweliphi na iziko laseKhanada eligunyazisiweyo likunika imbeko enkulu koontanga bakho, kumalungu osapho, koogxa bakho, kubasebenzi nakubathengi.
Kuya kufuneka ukuba uziqwalasele ezi zizathu ukuba ucinga ngokufundela idiploma okanye nayiphi na inkqubo yesidanga ngaphandle kwelizwe lakho.
Nangona kunjalo, ukufundela isatifikethi sediploma kwilizwe lakho kufuneka kuthathelwe ingqalelo. Ukufundela kwelinye ilizwe kuyabiza kwaye kukwakho umba wokuziqhelanisa nenkcubeko kunye nokutya, ukwenza abahlobo abatsha, kunye nezinye izinto eziza nokuba kwindawo entsha. Kodwa, emva kwethutyana, iqala ukuba ngamava amnandi.
Ewe kuyabiza ukufunda ngaphandle kwelizwe kukho iifizi zezifundo, iindleko zendiza, iindleko zokuhlala, kunye neendleko zokuhlala ngokubanzi. Njengomfundi wamazwe aphesheya, imali yokufunda iphezulu kakhulu kuwe kwaye xa ufuna ukufunda kwilizwe elifana neCanada, i-US, okanye i-Australia, zibiza kakhulu.
Ukufundela isidanga okanye idiploma eCanada kuyabiza xa udibanisa zonke iindleko. Nangona kunjalo, thina kwiZizwe eziManyeneyo iZizwe ziye zamba nzulu kwaye zazisa abafundi bethu uluhlu lwezifundo ezinamaxabiso aphantsi eCanada zabafundi bamanye amazwe.
Oko kukuthi, iikhosi zediploma ezidweliswe kwesi sithuba zezona zixabiso liphantsi zokufunda eCanada ngokukodwa abafundi bamanye amazwe. Ezinye iindleko ezinje ngokuhamba ngenqwelomoya, indawo yokuhlala, kunye neendleko zokuhlala zihlala zibiza kakhulu kwaye azifakwanga.
Ngaphambi kokuba siqhubeke nokuxoxa ngezi zifundo zinexabiso eliphantsi eCanada zabafundi bamanye amazwe, masiqwalasele ngokukhawuleza ii-FAQs ezingezantsi.
1 Ngaba idiploma ixabisekile eCanada?
2 Ixabisa malini idiploma eCanada?
3 Yeyiphi idiploma yexabiso eliphantsi eCanada?
4 Iikhosi zeDiploma ezingabizi kakhulu eCanada zaBafundi beZizwe ngeZizwe
4.1 Ukuziqhelanisa kwabahlengikazi eCanada kwiKholeji yaseLangara
4.2 IDiploma yeNkonzo yoLuntu kwiKholeji yaseNorth Island
4.3 Ukuyila iDiploma yeFashoni kwiSikolo seFilimu saseToronto
4.4 Idiploma yoBugcisa oBuhle kwiKholeji yaseNorth Island
4.5 Isatifikethi kuLawulo loKwakha kwiCentennial College
4.6 Ucoceko lwamazinyo kwiFanshawe College
4.7 Itekhnoloji yeHorticulture kwiYunivesithi yaseKwantlen Polytechnic
4.8 Ubuntatheli kwiKholeji eSt.Clair yoBugcisa boBugcisa neTekhnoloji
4.9 Izakhono zeNkcubeko kwiKholeji yaseCentennial
4.10 IDiploma yoKhuseleko lweCyber ​​Co-op kwiSikolo soLawulo lweToronto
4.11 Idiploma yokuDibana neMidlalo yeVidiyo (kwi-Intanethi) kwiSikolo seFilimu saseToronto
Ngaba idiploma ixabisekile eCanada?
Ukufumana idiploma eCanada kufanelekile kwaye ndinike ngaphezulu kwezinye izizathu zokuba kutheni kufuneka uthathele ingqalelo ukufumana idiploma eCanada. Ukufumana idiploma yakho eCanada ngokuzenzekelayo kukubeka phambili kukhuphiswano lwabasebenzi kwaye i-HRs kuyo yonke imibutho iya kuyamkela.
Ixabisa malini idiploma eCanada?
Iindleko zokufumana idiploma eCanada ziphakathi kwe-C $ 13,000 kunye ne-C $ 30,000. Isifundo sokufumana idiploma kwiziko lemfundo eCanada zihlala ziyahluka, kuya kufuneka unxibelelane neziko lakho ukuze wazi iindleko ezithile ezifunekayo zokugqibezela inkqubo yakho yediploma.
Yeyiphi idiploma yexabiso eliphantsi eCanada?
IYunivesithi yaseMennonite ibonelela ngediploma yexabiso eliphantsi eCanada yabafundi bamanye amazwe kwi-C $ 10,003 kwizidanga zokuqala kunye ne- $ 7,680 yabafundi abasele bephumelele.
Ezi FAQ kufuneka ziqhubeke ukunceda ekuthathweni kwakho kwezigqibo zokufundela idiploma yaseCanada.
Kwaye ngoku, ngaphandle kokuqhubela phambili, masiqhubeke sixoxe ngezifundo zediploma zexabiso eliphantsi eCanada zabafundi bamanye amazwe.
Iikhosi zeDiploma ezingabizi kakhulu eCanada zaBafundi beZizwe ngeZizwe
Apha ngezantsi luluhlu kunye neenkcukacha zezi zifundo zineediploma zexabiso eliphantsi ezili-11 eCanada zabafundi bamanye amazwe ezichazwe ngendlela ethile:
Ukuziqhelanisa kwabahlengikazi eCanada kwiKholeji yaseLangara
IDiploma yeNkonzo yoLuntu kwiKholeji yaseNorth Island
Ukuyila iDiploma yeFashoni kwiSikolo seFilimu saseToronto
Idiploma yoBugcisa oBuhle kwiKholeji yaseNorth Island
Isatifikethi kuLawulo loKwakha kwiCentennial College
Ucoceko lwamazinyo kwiFanshawe College
Itekhnoloji yeHorticulture kwiYunivesithi yaseKwantlen Polytechnic
Ubuntatheli kwiKholeji eSt.Clair yoBugcisa boBugcisa neTekhnoloji
Izakhono zeNkcubeko kwiKholeji yaseCentennial
IDiploma kwiCybersecurity Specialist Co-op kwiSikolo soLawulo lweToronto
Idiploma yokuDibana neMidlalo yeVidiyo (kwi-Intanethi) kwiSikolo seFilimu saseToronto
Ikholeji yaseLangara ibonelela ngeNkqubo yokuLondolozwa kwabaNtu kwinkqubo yaseCanada kwaye yenye yezifundo zediploma ezingabizi kakhulu eCanada zabafundi bamanye amazwe. Idiploma yenzelwe ukulungiselela ngokufanelekileyo ooNesi abaFundisiweyo baMazwe ngaMazwe (i-IEN) ukufaneleka kunye nokwenza isicelo selayisensi yomongikazi kunye nezikhundla zokuba ngumongikazi.
Ukubhalisa kule nkqubo kuya kuphuhlisa ukucinga kwakho okunzulu, ukugweba kweklinikhi kunye nokwenza izigqibo, unxibelelwano ngomlomo nangokubhaliweyo, kunye nokhuseleko lwenkcubeko njengoko kusetyenziswa kwicandelo lokhathalelo lwempilo. Idiploma ithatha iminyaka emi-2 ukuyigqiba.
Abafundi bamazwe aphesheya abanomdla kufuneka bathathe uvavanyo lobuchule besiNgesi, njenge-IELTS okanye i-TOEFL, iBachelor of Science Nursing, okanye iDiploma yeminyaka emithathu yoBuhlengikazi kule minyaka mine idlulileyo ukuze kuthathelwe ingqalelo ukwamkelwa.
Inkqubo yoLondolozo eCanada kwinkqubo yediploma yaseKhanada eLangara College yenze kolu luhlu lwezifundo zeDiploma zexabiso eliphantsi eCanada zabafundi bamanye amazwe ngenxa yemali yokufunda ephantsi okanye ngexabiso eliphantsi. Ixabisa i-590 yeedola ngekhredithi.
Inkqubo yeNkonzo yaBantu kwiKholeji yaseNyakatho yeSiqithi yenye yezifundo zediploma ezingabizi kakhulu eCanada zabafundi bamanye amazwe ezithatha iminyaka emi-2 ukugqiba kunye nemowudi yokuhambisa ikwi-campus nakwidijithali. Idiploma iya kukuxhobisa ngezakhono nolwazi ukuze usebenze kwiiarhente zenkonzo yoluntu ezibonelela ngenkxaso yoluntu, uncedo kwezemfundo, iinkonzo zentlalo, kunye nongenelelo lokuziphatha.
Izidingo zokungeniswa zibandakanya ukuhlangabezana neemfuno zolwimi lwesiNgesi ngokuthatha i-TOEFL (ibt), IELTS, okanye i-CAEL ngamanqaku aphakathi kwe-80, 6.0, okanye i-60 ngokwahlukeneyo ethathwe kule minyaka mibini idlulileyo. Ukugqitywa kwesiQinisekiso sezeMfundo / seNkxaso yoLuntu, ukuGxila kweMveli, okanye iiNkonzo zoLuntu ezilinganayo kule minyaka mi-5 idlulileyo ubuncinci be-C (60%) kwikhosi nganye.
IDiploma yeNkonzo yoLuntu kwiKholeji yaseNorth Island yenze kolu luhlu lwezifundo zeediploma ezingabizi kakhulu eCanada zabafundi bamanye amazwe ngenxa yemali yokufunda ephantsi okanye ngexabiso eliphantsi. Ixabisa i-22,140 yeedola ngonyaka.
Ngenxa yobhubhane weCovid-19, iSikolo seFilimu saseToronto asikavuleli ngokupheleleyo imisebenzi yokufunda ngaphandle kweintanethi. Nangona kunjalo, uninzi lwezifundo kubandakanya nokuYila iDiploma yeFashoni zithathiwe kwi-Intanethi ke, unokufumana idiploma kwi-intanethi. Inkqubo ifuna iinyanga ezingama-24 kunye nemigaqo esi-8 ukuba igqitywe.
Idiploma yoyilo lweFashoni eToronto Film School ijolise kumyili wefashoni ozayo ofuna ukukhulisa izakhono zabo kwishishini lefashoni kwaye akufundise malunga nokuyila nokuzenzela iimpahla, izihlobo, kunye nomthengi ekugqibeleni. Idiploma yenye yezifundo ezinamaxabiso aphantsi eCanada zabafundi bamanye amazwe, inkqubo yokufunda yi- $ 15,360.
Imfuno yokwamkelwa kukuba ubhale isincoko samagama angama-300-500 malunga nomyili oyithandayo kwaye ngoba, kwaye uhlawule umrhumo wesicelo se- $ 100.
Idiploma yoBugcisa oBuhle kwiKholeji yaseNorth Island yenye yeekhosi zexabiso eliphantsi eCanada zabafundi bamanye amazwe. Idiploma ibonelela ngemfundo egxile kumakhondo ekhuthaza ukusombulula iingxaki, ukucinga nzulu, kunye nophando kunye nezakhono zokuziqhelanisa ne studio. Ukuphuhlisa kwakhona izakhono ezibaluleke kakhulu kunye nethiyori kuluhlu olubanzi lweendlela ezibandakanya ubugcisa bendabuko, obahlukeneyo, kunye nobugcisa bedijithali.
Ubude benkqubo yiminyaka emi-2 kwaye buhanjiswa kwikhampasi kunye nokukhethwa kwidijithali. Iimfuno zezifundo ziimfuno zobuchule bolwimi lwesiNgesi. Ungathatha i-TOEFL (ibt), IELTS, okanye i-CAEL ngamanqaku aphakathi angama-80, 6.0, okanye ama-60 ngokwahlukeneyo athathwe kule minyaka mibini idlulileyo. Ezinye iimfuno zibandakanya ipotifoliyo yemisebenzi kunye nengxelo ebhaliweyo.
Idiploma yoBugcisa oBuhle kwiKholeji yaseNorth Island yenze kolu luhlu lwezifundo zeediploma ezingabizi kakhulu eCanada zabafundi bamanye amazwe ngenxa yemali yokufunda ephantsi okanye ngexabiso eliphantsi. Ixabisa i-14,045 ngonyaka.
I-Centennial College inikezela ngezifundo ezinamaxabiso aphantsi eCanada zabafundi bamanye amazwe, iSatifikethi kuLawulo loKwakha, esifuna unyaka omnye ukugqiba. Inkqubo ibonelela ngezakhono kwimicimbi yokuziphatha, inkxalabo yezomthetho, kunye neeprojekthi ezizinzileyo kwindalo esingqongileyo ukunika isidanga esipheleleyo kulwakhiwo nakwiprojekthi.
Izidingo zokungeniswa zibubungqina bokuba isiNgesi sisebenza kakuhle, ikopi ebhaliweyo okanye i-resume, kunye neyunivesithi okanye isidanga sekholeji kulwakhiwo, ubunjineli, okanye ulingano olunxulumene nolwakhiwo. Imali yokufunda yi-C $ 11,400 yeesemester ezimbini.
Inkqubo yococeko lwamazinyo kwiFanshawe College yenye yezifundo zediploma ezingabizi kakhulu eCanada zabafundi bamanye amazwe. Inkqubo yediploma ibonelela abafundi ngezakhono kunye nolwazi olufunekayo ukuze baziqhelise njengababoneleli beenkonzo zonyango lokuqala ngomlomo kwiindawo ezahlukeneyo zokuziqhelanisa, kubandakanya neklinikhi, imfundo, ukukhuthaza impilo kunye nophando.
Idiploma ekwicandelo lokhathalelo lwempilo kwaye ke ifuna iminyaka emi-3 yokufunda ngokusisigxina ukugqiba ikhosi. Imali yokufunda yi-C $ 7,596 ngonyaka. Ubungcali kulwimi lwesiNgesi luyafuneka kunye nezinye iimfuno zokwamkelwa ezinokufumaneka Apha.
Le yenye yezifundo zediploma ezingabizi kakhulu eCanada zabafundi bamanye amazwe eziyilelwe ukufundisa abafundi ukuba bazisebenzise njani izixhobo kunye neetekhnoloji eziyinxalenye yemihla ngemihla kushishino. Ikwafuna iminyaka emibini yokufunda ngokusisigxina ukugqiba.
Imali yokufunda yale nkqubo icwangciswe kwi- $ 46.98 ngekhredithi nganye.
Ubuntatheli eSt Clair College yoBugcisa boBugcisa neTekhnoloji sesinye sezifundo ezinamaxabiso aphantsi eCanada zabafundi bamanye amazwe. Idiploma iya kubonelela abafundi ngolwazi olunqamlezileyo kunye nezakhono ezenza ukuba bathengiswe kakhulu kuwo onke amaqonga.
Ngobuchule obomeleleyo bolwimi lwesiNgesi kunye nezakhono zokubhala, unokuthathelwa ingqalelo ukubhalisa kule nkqubo kwaye ube yintatheli enamava enezakhono ezinokuqeshelwa kwigumbi leendaba le-21st ngenkulungwane.
Ukuba ukupheka bekusoloko kuyinto yakho okanye sele usebaleni kwaye ufuna ukuphucula izakhono zakho kwaye ukhokele enye yezona ndawo zokutyela zibalaseleyo, unokufuna ukutsiba kule nkqubo. Izakhono zeNkcubeko kwiKholeji yaseCentennial yenye yezifundo zediploma ezingabizi kakhulu eCanada zabafundi bamanye amazwe. Ufunda kwizakhono ezikumgangatho wehlabathi zokupheka ngentlawulo encinci.
Le nkqubo ijikelezwe kakuhle kwaye iyakuthatha unyaka nje omnye ukugqibezela iisemester ezimbini kunye nemirhumo yokufunda ye- $ 2 yonyaka.
IDiploma yoKhuseleko lweCyber ​​Co-op kwiSikolo soLawulo lweToronto
Le yenye yeediploma zexabiso eliphantsi eCanada zabafundi bamanye amazwe, ithatha iiveki ezingama-51 ukuyigqiba, kwaye ilungele abafundi abafuna ukufumana izakhono zokufuna kunye nolwazi olukhethekileyo kuwo wonke umba wokhuseleko lwe-cyber. Ezi zinto zibandakanya i-blockchain, ulawulo lomngcipheko, idatha enkulu, kunye ne-IoT (i-Intanethi yeZinto) kunye nokwenza ukuba ulungele amathuba omsebenzi.
Ubuchule obomeleleyo besiNgesi buyafuneka ngenqanaba eliphakathi le-IELTS le-5.5 okanye elilinganayo, umbhalo, idiploma, okanye isatifikethi esivela kwelinye ilizwe elilingana nediploma yesikolo esiphakamileyo sase-Ontario ukuba kuvavanywa inkonzo yovavanyo eyaziwayo. Imali yokufunda yi-C $ 10,995 yabafundi bamanye amazwe.
IDiploma yokuDibana neMidlalo yeVidiyo kwiSikolo saseToronto seFilimu ibanjelwe kwi-Intanethi ikwenza ukuba uthathe inxaxheba naphi na emhlabeni. Inkqubo iyakukulungiselela ngezakhono zobungcali ukuze ube ngumenzi wobomi kwaye wenze ifuthe kumzi mveliso oguqukayo ngokukhawuleza. Ixesha lenkqubo yiminyaka emi-2 enemigaqo esi-8.
Abafakizicelo bayacelwa ukuba babhale isincoko esifutshane samagama angama-300-500 achaza iinjongo zakho zobuqu kunye nezomsebenzi kwimidlalo yevidiyo. Imali yokufunda yi- $ 20,160 kwiminyaka emi-2 epheleleyo.
Ezi zifundo zexabiso eliphantsi zediploma eCanada zabafundi bamanye amazwe, iinkcukacha kunye nekhonkco lesicelo kwisifundo ngasinye seDiploma zinikezelwe ukunceda ukwamkelwa kwakho kunye nokufumana izakhono eziya kuqala umdlalo wakho. Ezi zifundo zediploma eCanada zabafundi bamanye amazwe ziya kukumisela kwikhondo elifanelekileyo lomsebenzi kunye nokuseka ikhondo eliyimpumelelo.
Iikholeji ze-10 ezingabizi kakhulu eToronto Canada zaBafundi beZizwe ngeZizwe
Ixabiso eliphantsi kwi-Intanethi kwi-Bachelors Degree yaMazwe ngaMazwe naBafundi baseKhaya
I-10 eziphezulu kakhulu kwiIyunivesithi e-Australia kunye neMali yabo yokuFundisa
I-10 zeYunivesithi ezingabizi kakhulu e-UK zaBafundi beZizwe ngezizwe
Iiyunivesithi ezingabizi kakhulu zaBafundi beZizwe ngeZwe kunye nendlela yokufaka isicelo
I-10 Degree yexabiso eliphantsi e-Australia ngeScholarship
Ixabiso eliphantsi kwiikholeji ezikwi-Intanethi ngaphandle kweNtlawulo yokufaka isicelo
Isifundo kwamanye amazwe Isikhokelo Isifundo eCanada | Ukwamkelwa | Ulwabiwo-mali | Imirhumo | Izibonelelo neMali mboleko funda kwi-intanethi
izifundo zediploma ezingabizi kakhulu eCanada zabafundi bamanye amazweIikhosi zediploma ezingabizi kakhulu eCanada zabafundi bamanye amazwe
Post Previous:Izikolo ezili-15 eziPhambili eziQalayo eToronto
Okulandelayo Post:Iiyunivesithi ezi-7 ezineeNkxaso eziKhulu kuMfundi ngamnye eMhlabeni
Juni 19, 2021 kwi-3: 50
Ndifuna ukufunda iikhosi zeDiploma eCanada. Ndifuna ukufumana isatifikethi simahla. Ndimele ndizame. Nceda undinike ithuba.